Garasho La,aanta boggaga Internetka iyo Burburka ONLF – Rasaasa News
Oct 1, 2009 ethiopia, Jwxo-shiil, ONLF
Dalalka ama qoomiyadaha meel degan waxaa ay leeyihiin urur bulsho oo ku hawlan arimo kala duwan oo khuseeya dalka iyo dadka, ururadaas bulshadu waa kuwo is garab socda oo mid waliba uu qabto wax uu mihnad u lee yahay [profession], waxyaabahaa ay ururadu qabtaana badankoodu waa kuwo wax tar u leh bulshada sida; kobcinta dhaqaalah, kobcinta dhaqanka iyo suugaanta, kobcinta tacliinta iyo xifaradaha la xidhiidha, kobcinta samo falada, kobcinta caafimaadka, kobcinta siyaasada iyo dareenka wadaninimo iyo arimo badan oo kale.
Hawlahaasi, waa hawlo ay bilaabaan shaqkhsiyaad dabadeedna balaadha hadii aan la joojin, oo dadka hawshaas masuulka ka ahi ayna ka daalin.
Hadab, waxaa jra waxyaabo dhaqan u noqday guud ahaa umaddaha degan geeska Afrika, gaar ahaana dadka Somalida ah, gaar ahaan mida gaarka u ah qormadan waa ummada Somalida Ogadeeniya.
Waxaa ay gashay halgan dheer oo ay horseed ka ahayd Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] oo uu halgankeedu soo maray marxalado badan oo ku saabsan halganka ay Jabhadu waday. Waxaa ay Jabhadu damacday in ay dhisto dawlad kaamil ah oo qurbo joog ah, wayna dhistay intii karaankeeda ah runtii, waxayse ugu dambayn gashay khaladaad keenay burbur ku yimaada halganka ay waday Jabhadu kaas oo ahaa khalad sharciyeed [principal errors], sharci dumintu waa waxa ugu adag ee uu urur ama dawladi ay ku burburto.
Halganka ay Jabhadu waday waxaa dhinac socday dhaqdhaqaaqyo kale oo ay wadeen ururada bulshada sida; Ogaden Human Rights, Ogaden Youth, Ogaden Women Movement, Ogaden Reggo Music Movement, Ogaden Communities iyo qaar kale oo badan. Waxaa kuwan magaca dalka wata barbar socday dhaqdhaqaaqyo iyaga laftigood qabtay wax badan sida; Qorahey Education forum [QEF], Dhanaan Projects, Gode Farming Development [GFD] iyo kuwo kale oo badan.
Ururadaas oo dhan waa ururo ka madax banaan dhinacyada Siyaasada, waxayna qabtaan hawlo ay bulshada ugu adeegayaan si ay bulshadu u higsato garab istaaga bulshooyinka kale ee ku dhaqan geeska Afrika. Hadii ay dalka ka jirto Jabhad dagaal kula jirta Dawlada Itobiya oo uu dagaal u dhaxeeyo xukuumada iyo Jabhada, taas macnaheedu ma aha in ururada bulshada oo dhan ay yihiin Jabhada ama ay siyaasad lug ku lee yiahiin.
Hadaba, dhibaatada haysata dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaa waxay tahay in ayna marna lugta kala bixi karin in ay mid uun noqdaan kuwa raacsan xukuumada Itobiya ama raacsan ururka ONLF.
Dhibaatadu kama imanayso dadweynaha ee waxay ka imanaysaa dhinacyada kale, tusaale ahaan ururka OSF oo ka madax banaan siyaasad ayaa Jwxo-shiil, waxaa uu ka caydhiyey wiilkii aas aasay waa Ina Sheekh Maxamed Iraad, wuxuuna u dhiibay Wiil uu Abti u yahay oo la yidhaahdo Mustafe Xasan, waxaana uu ururka OSF ka amar qaataa Jwxo-shiil, garabkiisa meeshii uu u dhaxayn lahaa ummada Somalida Ogadeeniya oo dhinac iska dhigi lahaa siyaasad. Waxaa Tusaale kale ah in dhalinyarada Muusika Jecel ee reer Ogadeeniya, uu Jwxo-shiil ku sabsabtay in ay isga taageeraan, waxayan galeen siyaasad meeshii ay dadka u dhaxayn lahaayeen.
Waxaa Maanta wax laga naxo noqotay in bog ka mid ah boggaga internetka uu maanta soo qoreen ONLF oo xoojisay dhinaca saxaafada, waxa uu boggu ka hadlay waa filim googoos ah oo uu soo duubay wiil reer Ogadeeniya ah oo iskiis u soo duubay, kol uu booqday reyaha qaxootiga ee dhadhaaba. Arintaas oo ayna xaq u lahayn in la siiyo ONLF, oo aan iyadu waxba qabanin, laakiin wax wax qabtay waa urur bulsho loomana baahna in algu niyad jabiyo dadka ayagu iskood isu xilqaamay. Wiilka yari ma aha siyaasi laakiin waxaa dhibaato ah in si khaldan loo dhax galiyo siyaasad uusan shaqo ku lahayn, oo sida aan hubo uusan ku talo galin.
Ugu dambayn, waxaa wanaagsan in fahmaan boggaga Internetka iyo dadkuba in ay urur walba waxa uu qabtay loo nisbeeyo oo aan la siinin wax qabdkooda dadka leh oo aan iyagu, wax qabad ahayn kuna jira burburin, ka dib kolkii ay hanan waayeen xasilinta siyaasada ururka ONLf.